စိတ်ခံစားမှုညွှန်းကိန်း - YOYARLAY Digital Media and News
Published: May 5, 20182:42 am Updated: August 18, 20194:54 pm
ကြားဖူးနေကျ စကားလုံးတွေ ဖြစ်တဲ့ IQ တို့ EQ တို့ထဲက EQ ရဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ IQ (Intellectual Quotient) (ဉာဏ်ရည် ညွှန်းကိန်းအချိုး)၊ EQ (Emotional Quotient) (စိတ်ခံစားမှု ညွှန်းကိန်းအချိုး) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
IQ ကရှင်းပါတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ် တွက်ချက် သုံးသပ်ပြီး အသင့်တော်ဆုံး အဖြေကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ ဦးနှောက် စွမ်းရည်ပါ။ အခြေခံ သဘောတရား နားလည်မှုတွေ၊ သင်္ချာ သဘောတရား၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ၊ အစရှိတာတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ အနီးစပ်ဆုံး အဖြေထုတ် ရှာဖွေနိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ပြ အချိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာ EQ အကြောင်း ဖြစ်လို့ IQ အကြောင်း ဒီလောက်ပါပဲ။
EQ ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ ခေါင်းစဉ်ကွဲလေးများစွာ ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက တချို့ကတော့…
ပထမဆုံး အခြေခံ အရေးကြီးတာက မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်တိုင် သိနိုင်စွမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် ဘာစားတယ် ဘယ်သွားချင်တယ် ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မနာလို ဖြစ်နေသလား? တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မုန်းနေသလား? အမြင်ကတ်နေသလား? ဒေါသထွက်နေသလား? ကိုယ်ဟာ အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းတဲ့လူလား? ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူတွေကတော့ ပြနေတယ်၊ ကိုယ်ကိုတိုင်က သေချာမသိဘူးဆိုရင် ဒါဟာ သင့်ကို လူမှုဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေမှာ ဘေးကို တွန်းပို့နေတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်တိုင် သိနိုင်စွမ်းရှိပြီဆိုရင် အဲ့ဒီကိစ္စကို self-control လုပ်ဖို့ ရှိလာပါပြီ၊ ရှင်းပါတယ် ခုနပြောခဲ့တဲ့ မနာလိုမှု၊ အမြင်ကတ်မှု၊ ဒေါသထွက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပါ။ ဒေါသထွက်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ဒေါသထွက်သင့်သလောက် ဒီဂရီအတိုင်းအတာနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဒေါသထွက်တတ်ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် သင်ဟာ ဈေးထဲသွားပြီး ငါးဝယ်တော့ ငါးရောင်းတဲ့လူက သင့်ကို အလေးခိုးလို့ ပြဿနာ ဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့၊ သင့်ရဲ့ ဒေါသတွေကို အိမ်ပြန်လမ်းပေါ်မှာ ဆိုက်ကားဆရာဆီကို ပုံချလိုက်တယ် ဆိုတာ အဖြေမှန် မဟုတ်ပါဘူး၊ ငါးရောင်းသူနဲ့ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာ ငါးရောင်းသူနဲ့ပဲ ရှင်းရမှာဖြစ်ပြီး ဆိုက်ကားဆရာနဲ့ လုံးဝ မပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အူကြောင်ကြောင် နိုင်တယ် ထင်ရပေမယ့် EQ မြင့်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးလေးတွေကအစ ထိန်းချုပ်နိုင်တာကို ခေါ်ပါသတဲ့။ အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တာကတော့ တော်တော်လေး EQ မြင့်မှ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် အမှန်အတိုင်း လက်ခံပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ရှေးရိုးစွဲ မဟုတ်တဲ့ စိတ်မျိုးပေါ့။ လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ရှေးရိုးစွဲဆန်တဲ့ နိုင်ငံသား တော်တော်များများဟာ EQ နိမ့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ ကိစ္စ၊ ကိုယ်နားလည်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေကို ခေတ်စနစ်အရ၊ လူနေမှုအရ၊ အရပ်ဒေသအရ မှားနေပြီလို့ ယူဆရင် ပြောင်းလဲလက်ခံရဲတဲ့ စိတ်ထားရှိရပါမယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ကိုယ်မှားနေမှန်း သိပါရက်နဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက မှန်ခဲ့တာကို ပြန်တွေးပြီး လက်မခံနိုင်တာဟာ EQ နိမ့်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စေ့ဆော်တာ၊ တိုက်တွန်းတာပါ။ ကြိုးစားဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တိုက်တွန်းနေတဲ့စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မောင်းနှင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ သူများခိုင်းမှ၊ တိုက်တွန်းမှ လုပ်တာမျိုး မဟုတ်တဲ့စိတ်ထားမျိုးပေါ့။ သခင်စိတ်ထားတယ်၊ ကိုယ့်အလုပ်လို သဘောထားတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ EQ မြင့်တဲ့ သူများသာ ဒီလိုစိတ်မျိုး ထားနိုင်တယ်ပေါ့။
သူတစ်ပါးကို စာနာတတ်တဲ့ စိတ်ထားပါ။ ကိုယ်ခြင်းစာတရားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါး ထိခိုက် နစ်နာသွားမယ့် ကိစ္စကို မလုပ်တာ၊ မပြောတာ၊ စောင့်ထိန်းနိုင်တာမျိုးပါ။ သဘောထားကြီးပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုးဟာ EQ မြင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် နားလည်နိုင်တယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်၊ ထိန်းညှိနိုင်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စေ့ဆော် တိုက်တွန်းနိုင်တယ်၊ သူတစ်ပါးကို စာနာနိုင်တယ်ဆိုရင် EQ မြင့်တယ်။
သာမာန် EQ အဆင့်တန်းရှိတဲ့ လူတွေတောင် အလုပ်တစ်ခုကို ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရတာ တော်တော်လေး လွယ်ကူမှာပါ။ EQ မြင့်တဲ့ လူများဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာနာ နားလည် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း လိုတဲ့စိတ်ရှိကြလို့ပါ။
မိမိကိုယ်ကို EQ မြင့်အောင်ကြိုးစားရင်း လူအများနဲ့ သင့်တင့် လျောက်ပတ်အောင် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ရင်း မိမိ နိုင်ငံကို အကျိူးပြုနိုင်ပါစေ။
Previous Previous post: မီးရှို့နည်းကိုအသုံးပြုပြီး ဆံပင်ညှပ်တဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆရာ
Next Next post: ကြက်ဥက အရင်လား ကြက်မက အရင်လား
တကယ်လို့ ထမင်းမငတ်သေးဘူးဆိုရင် တစ်ခုခု စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်
(၁) ညနေခင်းမှာ ဘုန်းကြီးနဲ့ကလေးတွေ အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာနား သွားကြည့်နေတုန်း ကျောင်းသူနှစ်ယောက် ပြေးလာတယ်။ ‘ဘုန်းဘုန်းဘုရား၊ ကျောင်းထဲကို လူကြီး နှစ်ယောက်ဝင်လာတယ်။ သူတို့ဗိုက်ဆာတယ်။ ထမင်းစားချင်လို့ပါတဲ့ဘုရား’။ လမ်းစရိတ်ပြတ်လာလို့၊ ထမင်းစားဖို့ မရှိလို့ . . .ဆိုပြီး အခါတိုင်းမှာလည်း…
Published: April 25, 202011:46 am Updated: 11:47 am
သြစတြေးလျှ နိုင်ငံ၏ ကမ်းခြေအလှတရား နှင့် သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဆိုလျှင်
သြစတြေးလျှ နိုင်ငံသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စွန့်စားခြင်းများ ပြုလုပ်ရသည်ကို နှစ်သက်သူများအတွက် သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အလွန်ပင်သင့်တော်သော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Cairns သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးကျယ်ဆုံးသော ထူးခြားသော သဘာဝ အလှတရား တည်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် နေရာတစ်ခုလည်း…
Published: October 4, 20191:28 pm
အားနာတဲ့ ခံစားချက်ကို လူတော်တော်များများ ကြုံဖူးမှာပါ။ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်မတို့ အားနာကြလဲ? ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း၊ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် တစ်ဖက်သား ထိခိုက်နာကျင်မှာ စိုးတဲ့အတွက် အားနာစိတ် ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ချင်ပေမဲ့ တစ်ဖက်သား စိတ်ကွက်သွားမှာ…
Published: November 17, 20186:31 am Updated: October 8, 20195:33 pm